IPHONE ပေါ်မှာလျှောက်လွှာကိုပိတ်လိုက်ဖို့ကိုဘယ်လို - IOS အတွက် - 2019
စီးရီးအခြားအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်အများကြီးအတူတူပင်လမ်းအတွက်အလုပ်လုပ် router မော်ဒယ် DIR-620 D-Link ရဲ့ပြင်ဆင်ထား။ သို့သော်ဤသည် router ၏အင်္ဂါရပ်အိမ်ကွန်ယက်နှင့်အထူးကိရိယာ၏အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦးထက်ပိုသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် configuration ကိုပေးအနည်းငယ်အပိုဆောင်း features တွေ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင်ငါတို့ရှိသမျှသည်လိုအပ်သော parameters များကိုထိခိုက်စေ, အသေးစိတ်အတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် configuration ကိုဖော်ပြရန်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ဝယ်ယူပြီးနောက်ယူနစ်အထုပ်များနှင့်တစ်ဦးအကောင်းဆုံးတည်နေရာ၌ထားတော်မူ၏။ signal စီးဆင်းမှုကွန်ကရစ်နံရံများတားဆီးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောခရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုကဲ့သို့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ, running ။ တည်နေရာတစ်ခုရွေးချယ်တဲ့အခါကဤအချက်များစဉ်းစားပါ။ ကွန်ယက်ကို cable ရဲ့အရှည်ကိုလည်း PC မှာဖို့ Router ကနေကိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်သင့်သည်။
device ကို၏နောက်ကျော panel ကိုအာရုံစိုက်။ ကအားလုံးကိုပစ္စုပ္ပန် connectors ဖြစ်ကြသည်တွင်, connection တစ်ခုချင်းစီလွယ်ကူချောမွေ့, ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ရှိပါတယ်။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်လေးရှိနေရင် LAN port များ, အဝါရောင်, USB နဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးဝါယာကြိုးများအတွက် connector ကိုအတွက်မီးမောင်းထိုးပြသည့်တ WAN, ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Router ကသေချာပေါက် operating system ကိုမှတဆင့် check လုပ်ထားထားတဲ့၏ parameters တွေကိုသူ့ရဲ့အိုင်ပီနှင့် DNS ဘို့အလိုအလြောကျဖျော်ဖြေသည်ကို TCP / IPv4 protocol ကိုဒေတာကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
လွတ်လပ်စွာက Windows အတွက်ဒီ protocol ၏တန်ဖိုးကိုအတည်ပြုရန်နှင့်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့အောက်ကလင့်ခ်မှာဆောင်းပါးရှုပါ။
အသေးစိတ်: အဆိုပါကွန်ရက်က settings ကို Windows7ကို
အဆိုပါ device ကိုယခုဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်ထို့နောက်ကျွန်တော်မှန်ကန်စွာအကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Router ကို D-Link DIR-620 Configuring
D-Link DIR-620 ဟာ install လုပ်ပြီးသား firmware ကိုပေါ် မူတည်. က်ဘ် interface ကိုနှစ်ခုဗားရှင်းရှိပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျသူတို့ကိုအကြားတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်အသွင်အပြင်ဟုခေါ်တွင်စေလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းမှတဆင့်တည်းဖြတ်လုပ်ဆောင်သွားရန်ပါလိမ့်မယ်, သင်အခြား installed လျှင်, သင်ရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဘုရားရဲ့အလားတူပစ္စည်းများကိုရှာနှင့်၎င်းတို့၏တန်ဖိုးများထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အစပိုင်းမှာဝဘ် interface ကိုအပေါ် log ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤအမှုကိုပြုသောသည်:
လိပ်စာဘားတန်းရှိရာအမျိုးအစားဝဘ်ဘရောက်ဇာကို, Start192.168.0.1နှင့်စာနယ်ဇင်း ဝင်ရောက်။ ပုံစံရိုက်ထည့်ပါနှစ်ဦးစလုံးလိုင်းများပေါ်တွင်သင်၏ login နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ရန်သင့်အားတောငျးဆိုပုံပေါ်admin ရဲ့နှင့်အရေးယူအတည်ပြုပါ။
လိုချင်သောပြတင်းပေါက်ရဲ့ထိပ်မှာသက်ဆိုင်ရာခလုတ်သုံးပြီးဖို့ interface ကိုအဓိကဘာသာစကားပြောင်းလဲပါ။
ယခုတွင်သင်သည် setting များကိုနှစ်မျိုးများထဲမှတစ်ဦးရှေးခယျြမှုရှိသည်။ ပထမဦးဆုံးအသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့် default အကွန်ရက်ဆက်တင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုအဘို့အရာတစ်ခုခုကိုထိန်းညှိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတဲ့သူအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒုတိယနည်းလမ်း - အသေးစိတ်အဖြစ်ကို manual စီအမှတ်ချမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏တန်ဖိုးကိုညှိ။ သင့်လျော်သော option ကို Select လုပ်ပါနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
tool တစ်ခု « Click'n'Connect » ဒါဟာလျင်မြန်စွာစီမံလုပ်ကိုင်မှုကိုဖျော်ဖြေဖို့အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သူကသာအဓိကအချက်တွေကိုပြသထားပြီး, သငျသညျကိုသာလိုအပ် parameters များကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မြေတပြင်လုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ကိုဖတ်ရှုရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်တစ်ဦးချင်းစီ၏အဆင့်သုံးဆင့်သို့ခွဲခြား:
ဒါဟာသင်ပေါ်တွင်ကလစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူအားလုံးစတင် "Click'n'Connect", သင့်လျော်တဲ့ slot ကသို့ပါဝါကြိုး Plug နဲ့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
D-Link DIR-620 3G ကွန်ယက်ကိုထောက်ခံပါတယ်, ထိုသို့သာပံ့ပိုးပေးရွေးချယ်တည်းဖြတ်သည်။ သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်တိုင်းပြည်သတ်မှတ်, သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်တွင်ဆက်သွယ်မှုကိုရွေးချယ်ပါ, ထိုတန်ဖိုးကိုထွက်ခွာနိုင်ပါတယ် "ကိုယ်တိုင်" နှင့်ကလစ်နှိပ်ခြင်း "Next ကို".
WAN ချိတ်ဆက်မှုသင်၏ ISP type ကိုအသုံးပြုတဲ့အချက် mark ။ စာချုပ်များ၏လက်မှတ်ရေးထိုးမှာမှတ်တမ်းတင်ပေးခွငျးဖွငျ့လေ့လာပါ။ သင်ကမရှိကြပါဘူးလျှင်, သင်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီရဲ့ထောက်ခံမှုဝန်ဆောင်မှုကိုဖတ်ရှုပါ။
နှိမ့်ချညွှန်မှတ်စာလိပ်ကိုသွင်းယူပြီးနောက်နောက် window ကိုသွားပါ။
အဆိုပါကွန်နက်ရှင်အမည်, username နှင့် password ကိုစာရွက်စာတမ်းများလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ကနှင့်အညီလယ်ကိုဖြည့်စွက်။
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "နောက်ထပ်ဖတ်ရန်"သင့်ရဲ့ ISP ကအပိုဆောင်း parameters တွေကို၏ installation လိုအပ်တယ်ဆိုလျှင်။ ပြီးစီးကလစ်နှိပ်ပြီးနောက် "Next ကို".
သင်ရွေးချယ်ထားသော configuration ကိုပြသပါကဖတ်ပြောင်းလဲမှုများလျှောက်ထားဒါမှမဟုတ်မှားယွင်းတဲ့ပစ္စည်းများပြင်ပေးပြန်သွားပါ။
ဒီပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုပြီးစီးခဲ့သည်၌တည်၏။ ယခု utility ကိုအင်တာနက်များ၏ရရှိနိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း, propingovku ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Re-run သို့မဟုတ်ချက်ချင်းလာမယ့်ခြေလှမ်းကိုသွား, check လုပ်ထားသည့်ဆိုဒ်များပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အတော်များများကအသုံးပြုသူများသည်တစ်အိမ်မှာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်လက်ပ်တော့ရှိသည်။ သူတို့က Wi-Fi ကိုမှတဆင့်သင်၏နေအိမ်ကွန်ယက် ချိတ်ဆက်. , ဒါကြောင့်ဒီ tool ကတဆင့်အနေနဲ့ access point အတွက်လုပ်ငန်းစဉ် « Click'n'Connect » နှင့်ဖျက်သိမ်းရပါမည်။
မဝေးတော့တဲ့တစ်အမှတ်အသားထားပါ "Access Point" နှင့်ရှေ့ဆက်။
အဆိုပါ SSID သို့ထည့်သွင်းပါ။ ဤအမည်သည်သင်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်၏နာမတော်ကိုက်ညီ။ ဒါဟာရရှိနိုင်ဆက်သွယ်မှုများ၏စာရင်းမြင်လိမ့်မည်။ သငျသညျမှအဆင်ပြေမေးပါနှင့်သူ၏နာမကိုအမှီသတိရပါ။
အဆိုပါစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း option ကို specify လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးက "ပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်" နှင့်လယ်ပြင်၌ခိုငျခံ့သောစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ "လုံခြုံရေးသော့"။ ထိုကဲ့သို့သောတည်းဖြတ်ထုတ်တင်ဆောင်လာသောပြင်ပဆက်သွယ်မှုကနေ access point ကိုကာကွယ်ပေးရန်ကူညီပေးပါမည်။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း၌ရှိသကဲ့သို့, သင်တို့၏ရွေးချယ်မှုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, နှင့်အပြောင်းအလဲများသက်ဆိုင်ပါသည်။
တခါတရံပံ့ပိုးပေး IPTV န်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။ Router ကိုချိတ်ဆက်တီဗီ-top Box လေးနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားမှဝင်ရောက်ခွင့်ရန်။ သငျသညျဤဝန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့လျှင်, တစ်ခုရရှိနိုင် LAN terminal ကိုစ cable ကို plug ဝဘ် interface တစ်ခုကသတ်မှတ်နှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို"။ အဆိုပါရှေ့ဆက်ပစ္စုပ္ပန်ကိုမဖြစ်လျှင်, ရိုးရှင်းစွာခြေလှမ်း skip ။
ကို manual setting ကို
အချို့သောအသုံးပြုသူများ fit ပါဘူး « Click'n'Connect » လိုအပ်မှုကို manually ဒီတူရိယာထဲမှာမပါသောအပိုဆောင်း parameters တွေကို configure လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အားလုံးတန်ဖိုးများဝဘ် interface ကို၏အခန်းကဏ္ဍကနေတဆင့်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ရဲ့လုံးဝဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပါစို့နှင့်, WAN နှင့်အတူစတင်:
တစ်ကဏ္ဍသို့ရွှေ့ရန် "ကွန်ယက်" - "WAN"။ ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, အားလုံးပစ္စုပ္ပန်ဆက်သွယ်မှု checkbox ကို select လုပ်ပါ, သူတို့ကိုဖယ်ရှား, ပြီးတော့သစ်တစ်ခုတဦးတည်းကိုဖန်တီးရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းလိုအပ်လျှင်, ကွန်နက်ရှင် protocol ကို, အင်တာဖေ့အမည်နှင့် MAC-လိပ်စာများ၏အစားထိုးရှေးခယျြပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပေးမယ့်စာရွက်စာတမ်းအတွက်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီအားလုံးနယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ပေးပါ။
Next ကိုနှိမ့်ချ scroll နှင့်တွေ့ပါ "ပီပီပီ"။ ဒေတာကိုထည့်ပြီးအင်တာနက်ကို၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်အတူစာချုပ်သုံးပြီးနှင့်အဆုံးမှာအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Apply".
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပဲမိနစ်အနည်းငယ်အတွက်အတော်လေးအလွယ်တကူဖျော်ဖြေနေသည်။ ရှုပ်ထွေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုချိန်ညှိမရှိပါ။ သငျသညျအောကျပါလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်:
အဆိုပါဖွင့်ပါ "အခြေခံပညာ Settings" ကိုစေလွှတ်ခြင်းဖြင့် "ကို Wi-Fi ကို" လက်ဝဲ pane ထဲကကို။ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ပေါ်တွင် Turn နှင့်အသံလွှင့် activate လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ရက်အမည်ပထမဦးဆုံးအညီမေးပါ, ထို့နောက်တိုင်းပြည်ထည့်ပါ, ကြိုးမဲ့ mode ကိုအသုံးပြုတဲ့ရုပ်သံလိုင်းအမျိုးအစား။
အဆိုပါ "လုံခြုံရေးက Settings" အဆိုပါ protocol များ၏တဦးတည်းကို select, encryption ကိုနှင့်ပြင်ပဆက်သွယ်မှုအပေါ်မိမိရဲ့ access point ကိုကာကွယ်ရန်စကားဝှက်တစ်ခုထားကြ၏။ အပြောင်းအလဲတွေလျှောက်ထားရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။
D-Link DIR-620 ထောက်ပံ့ပေး WPS function ကိုအပြင်, ပေါ်မှာဖွင့်နှင့် PIN ကို-code ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: ကဘာလဲနှင့်သင် WPS ရူးတားဖို့လိုပါတယ်အဘယ်ကြောင့်
အောင်မြင်တဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံပြီးနောက်သင့်ရဲ့မှတ်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်အသုံးပြုသူများမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အပိုင်း "ကို Wi-Fi ကို client များ၏စာရင်း" အဆိုပါ devices များအားလုံးဖော်ပြပေးအဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်ခွဲခြာ function ကို။
အဆိုပါပုဒ်မတွင် « Click'n'Connect » ကျနော်တို့ပြီးသားအကြောင်းအရာ Router က 3G အထောက်အပံ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ။ authentication သီးခြား menu ကနေတစ်ဆင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုသာသင့်လျော်သောလိုင်းများအတွက်မဆိုအဆင်ပြေ PIN ကို-code ကိုထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည်။
Router ကသင်တစ်ဦးကို USB-plug ကို drive ကိုတဆင့်တစ်ဦးချိတ်ဆက်ရန် boot ခွင့်ပြုလို့ Torrent-client ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ တခါတရံမှာလူ function ကိုတစ်ဦးညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာသီးခြားအပိုင်းထွက်ယူသွားတတ်၏ "လို့ Torrent" - "Configuration"။ ဒီနေရာတွင် download, ဝန်ဆောင်မှု၏လုပျငနျးကိုသက်ဝင်ခြင်း, ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားပေါင်းထည့်ရန်ဖိုလ်ဒါကိုရွေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျအထွက်နှင့်အဝင်အသွားအလာအပေါ်ကန့်သတ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဒါကအခြေခံ setup ကိုပြီးစီးခဲ့သည်ပြီးဆုံး, အင်တာနက်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆှေးနှေးမညျသော optional ကိုပြီးအဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ပါရန်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ကွန်ယက်၏ပုံမှန်လည်ပတ်အပြင်ယင်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေချာစေရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဒါက built-in ကို web interface ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကူညီပေးပါမည်။ သူတို့တစ်ဦးစီအသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးချင်းကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်အောက်ပါ parameters တွေကိုသက်ရောက်စေမည်:
၏ကဏ္ဍ "ထိန်းချုပ်ရေး" ရှာ "URL ကို-Filter ကို"။ ဤတွင်အဘယ်အရာကိုတည်နေရာနှင့်အတူလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုသတ်မှတ်။
အခန်းကို Go "URL ကို-address 'သင်ယခင်ကညွှန်အရေးယူလျှောက်ထားသောလင့်များ၏န့်အသတ်အရေအတွက်ကထည့်နိုင်သည်ဘယ်မှာ။ ပြီးစီးပေါ်မှာပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါဖို့မမေ့မလြော့ပါ "Apply".
၏ကဏ္ဍ "Firewall ကို" တစ်ဦး function ကိုလည်းမရှိ "အိုင်ပီ-filter များ"ဘယ်အခြို့သောဆက်သွယ်မှုများကိုပိတ်ဆို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ လိပ်စာထည့်သွင်းဖို့ရွှေ့ဖို့, သင့်လျော်တဲ့ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါ protocol ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို Set များနှင့်လုပ်ရပ်များလျှောက်ထားခြင်း, IP ကို-လိပ်စာများနှင့်ဆိပ်ကမ်းများသတ်မှတ်။ နောက်ဆုံးခြေလှမ်းကို click ရန်ဖြစ်ပါသည် "Apply".
ဒီအလုပျထုံးလုပျနညျးကတော့ filter ကိုရဲ့ MAC address များဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
လိပ်စာ bar မှာရိုက်ပြီးသူ့အဘို့မတပ်မက်လိုချင်သောအ action ကို select လုပ်ပါ။
အတွက် configuration Completing
အတွက် configuration လုပ်ငန်းစဉ်၏အောက်ပါ parameters တွေကိုတည်းဖြတ် router ကို D-Link DIR-620 ပြီးဆုံး။ ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီဆနျးစစျကွပါစို့:
လက်ဝဲ Menu ထဲမှာ "စနစ်" - "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Password ကို"။ ပြင်ပကနေဝဘ် interface ကိုတံခါးဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ပိုမိုလုံခြုံရန်လက်လှမ်း key ကိုပြောင်းပါ။ သင်သည်သင်၏ password ကိုမေ့လျော့ကြပြီလျှင်, default အနေနဲ့တန်ဖိုးသည် router ၏ setting ကို reset ပါလိမ့်မယ် restore ။ ဒီဘာသာရပ်အပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့ကတခြားဆောင်းပါး၌တွေ့နိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်: တစ် router ကိုအပေါ် password ကို Reset
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်မော်ဒယ်တစ်ဦးကို USB-drive ကို၏ဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ခံပါတယ်။ သငျသညျအထူးအကောင့်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်, ထိုစက်ပေါ်ရှိဖိုင်များကို access ကိုကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ စတင်ရန်, သွားပါ "ကို USB အသုံးပြုသူများ" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Add".
, အသုံးပြုသူအမည် Add စကားဝှက်, နှင့်လိုအပ်ပါကအနီးရှိ box ကိုစစ်ဆေး "သာလျှင် Read".
အလုပ်အတွက်ပြင်ဆင်မှု၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါကြောင့်လက်ရှိဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုကယ်တင်နှင့် Router က reboot လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ရရှိနိုင်ပါ backup လုပ်ထားနှင့်စက်ရုံတွင် settings restore ။ အားလုံးဒီအပိုင်းကတဆင့်ပြု "ပြုပြင်".
purchasing သို့မဟုတ်မှပြန်လည်စတင်ပြီးနောက် router ကို၏ပြီးပြည့်စုံစိတ်ကြိုက်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအတွက်, အချိန်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးရှုပျထှေးဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပြီး, ညွှန်ကြားချက်အထက်တွင်သင်အလုပ်တခုကိုကိုယ်နားလည်ကူညီသင့်ပါတယ်။